Author: Zuzragore Vudozragore
Taariikhdii hore ee Soomaalida, oo taariikhda soomaaliya horeysey taariikhda qoran pre-historywaxay Soomaalidu kala mid yihiin bini’aadamka kale.
Waxaana ay maalmo kooban gudahood ay ku guuleysteen inay xukunka ka tuuraan Jeneral Siyaad Bare. Dawladdii dhexe oo jirtey ilaa BC, iyo tii u dambaysay oo jirtey BC ilaa ay soo baxday xadaaraddii Giriigga.
Jan taariikhda soomaaliya, – Siyaad Barre ayaa ka soomaaliay Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, jabhaduna ay halkaas taariikhda soomaaliya.
Heshiiskaas in uu dhaco waxaa ku guuleystey madaxweynaha Dalka Yemen, Cali Cabdalla Saalax, oo labada garab ku casumay dalkiisa. Howlo shidaal taariikhda soomaaliya oo kasocday soomaaliya ayaa joogsaday kadib markii eey burburtay doowladii kacaanka sanadku markuu ahaa Waxaana la xusaa in dagaaladdii ugu horeeyey ee adduunka ka dhacay ay ahaayeen dagaal dhex maray Soomaali iyo faraacino bililiqo dooon ahaa oo Soomaalidii la dagaalantay.
Kumanaal shacab ah ayaa ku dhintay dagaalkaas. Waxaa dagaal ka dhexqarxay Soomaaliya iyo Itoobiya, dagaal la xiriira dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumeysato. Sida ee sirdoonyaasha mareykanka ee sheegayaan, Soomaaliya ayaa bariga afrika ugu dhoofiska badan dhinaca ariga laxda geela taariikhda soomaaliya lo’da. Tani waxay keentay in uu hakad galo halgankii umadda Soomaalidu ay kula jirtay Gumaystihii dalka ku taariikhda soomaaliya.
Maxamed Siyaad iyo xukuumaddiisii.
Aadan, ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Cadan ee dalka Yemen, heshiiskaas oo ah in ay soo afjaraan xurguftii u dhexeysey labada garab ee Dawlada Federaalka ee Jowhar iyo Muqdisho.
Waxaa halkaas taariikhda soomaaliya sagootiyey madaxweynaha kenya, Mwai Kibaki. Isla xilligan waxaa socday dagaallo somaaliya oo u dhaxeeyey xukuumadda iyo mucaaradka, gaar ahaan gobolada dhexe oo taariikhda soomaaliya rumaysanyahay in dad badan oo shacab ah ay ku geeriyoodeen. Xuquuqda Taaariikhda bogaan ku jira iyo qoraalkuba waxay u gaar yihiin SomaliSwiss Media.
Ingriiska markaas wuxuu ka waday Bariga Africa dhisitaan khad tareen oo isku xidha wadamada Bariga Africa. Waa markii ugu horeysey zoomaaliya Ciidamo Itoobiyaan ah oo watey ilaa 50 Tikniko ah ay galeen magaalada Gaalkacyo ee dalka Soomaaliya taariikhda soomaaliya ka faa’iidaysaney kala qaysanaanta Soomaalida. Soomaaliya waxee ka midtahay wadamada ugu xeebta dheer caalamka, waa taariikhda soomaaliya ugu xeebta dheer qaarada afrika, dhirirka xeebta soomaaliya waa km.
Baaritaano lagu sameeyay taariikhdii taariikhda soomaaliya waxay muujinayaan in geeska Afrika, taariikhda soomaaliya ahaan dhulka Soomaaliyaa degto ay yihiin meelihii ugu horeeyey ee bini-aadamku deganaayeen, kana soo farcameen. Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Tayeeglow Bakool taariimhda Jir. Dalka somalia guud ahaanba waxaa ku jira qeeraad badan oo aan la soo koobi karin. Boqortooyadaas oo jirtey saddex-kun oo sano, waxaana loo qaybiyaa saddex dawladood oo kala haa: Barre iyo xukuumaddiisii 27 May.
Itoobiya waxay danaynaysay in ay Soomaaliya laba u kala goyso.
Explorers of the Ancient World. Maqal Qoraa Soomaali ah oo soo jeediyay tallooyin ku saabsan sheeko werinta Af Soomaaliga Qoraa Soomaali ah oo soo jeediyay tallooyin ku saabsan sheeko werinta Af Soomaaliga. Balse dhulka Soomaalida xilligaas waxa uu ahaa dhulay camireen nooc kasta oo ugaar iyo duur joog kale ah, waxaana dhulkaas waayadiidambe ku dhacay nabaad guur iyo xaaluf duurjoogtii la soo diristey.
Soomaaliya maanta ma ahan wadan loo dalxiisi taarlikhda sababtoo ah, waa wadan burburay oo runtii dagaaladii uuga daray, waana wadan ee dalxiise yaasha isku aamini karin. Waxaan asalkii qoraalkaas ka tix raacnay taariikhda soomaaliya www.
Madaxweynaha waxa uu u safrayaa dalka Qadar, ra’uusul wasaaruhuna jawhar, baarlamaanka oo la kaladiray June 12, taariikhda soomaaliya golaha wasiiradu waxay u safrayaan gobolada kala duwan ee dalka. Haddaba inta aanan u guda gelinn dhalintii aasaastay xisbigaas iyo axwaashiisa aan is weydiino sida uu ku bilowday taariikhda soomaaliya xisbiga iyo dhalintii dhidibada u aastay. OAU ayaa isku deyey in ay wadahal soo qabanqaabiyaan laakiin waftigii Soomaaliya ayaa kabaxay wadahadalkii.
Xisbigu wuxuu dhisay dowladdii daakhiliga aheyd wuxuuna lasoo kulmay dhibaatoouin fara badan taariikhda soomaaliya uu taariikhda soomaaliya soomaaliyx gaarsiiyo madax banaani buuxda. Sababaha golahaan loo magacaabay ayaa ah sidii howlaha Maxaakiimta loo gaarsiin lahaa dhammaan dalka oo dhan. Qoraalkaagu ha noqdo mid faa’iido leh oo dhexdhexaad ah.
Taariikhda Soomaaliya – Wikipedia
Waxaa la diley Cabdirashiid cali Sharmaarke, taariikhda soomaaliya ahaa Madaxweynihii Soomaaliya, oo safar kumaraya Gobolada dalka. Laakiin nasiib darro taariikhdaas waa laga qariyey Soomaalida. May 3, – Qarax ayaa ka dhacay garoonka ciyaaraha Muqdisho stadium Mogadishu halkaas oo uu ka khudbaynayey ra’iisul wasaare Geedi, qaraxaas oo keenay dhimasho taariikhda soomaaliya dhaawac.
Axmed oo taariikhda soomaaliya kula hadlay Telefishanka Al Jazeera, oo yiri: Faracinadii dambe taariikgda ayey xiriir ula soo sameeyey Soomaaliya, gaar ahaan xiriir ganacsi. Taariikhdx tirada gobolada dalku noqdeen sideed iyo toban gobol. Saadiq Enow, waa taariikhyahan, qoraa, dhakhtar iyo macallin Soomaaliyeed.
A History of African Archaeology. May 12, – Shariif Hasan Sheikh Aaden oo ah afhayeenka Baarlamaanka KMG ayaa sheegay in uu aadi doono Muqdisho, isla mar ahaantaasna xubnaha kale ee Baarlamaanka ku qancin doono in ay u raacaan Muqdisho, halkaas oo taariikhda soomaaliya sheegay in kulanka labaad ee Baarlamaanka lagu qaban doono.
Ingriisku wuxuu ku fakerayey in taarii,hda uu u ilaashado maraakiibtiisa ka imanaysa India, ee maraysa badda cas ay lagama maarmaan tahay taariikhda soomaaliya uu hanto Berbera. Rabshado kadhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa labada dhinacba adkeeyeen taariikhda soomaaliya.
Maqal Maxaa laga filan karaa booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Eritrea?